Myanmar Idol SMS Voting (အူရီဒူးသုံးစွဲသူများအတွက်သာ)
Myanmar Idol စကာတင်ပြိုင်ပွဲဝင် ၁၁ယောက်ကို ရွေးချယ်လို့အပြီးမှာတော့ ယခုအခါ အဆိုပါပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို နောက်ဆုံး အဆင့်အထိပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သွားနိုင်အောင် ကူညီပေးရမယ့်အချိန်သို့ရောက်ရှိလာပါပြီ။
ကဲ မိတ်ဆွေရဲ့ အူရီဒူးဆင်းမ်းကတ်နဲ့ Vote ပေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား?
Vote ပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ ကုတ်နံပါတ် ၇၇၇၇ သို့ မိမိနှစ်သက်ရာပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ နံပါတ်တွေကို ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ချိန်အတွင်းပေးပို့လိုက်တဲ့ Vote များကိုသာ တရားဝင်ထည့်သွင်း စဉ်းစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
*** Vote ပေးပို့နိုင်သော အချိန်ဇယားမှာ MNTV ၏ညွှန်ကြားချက်အပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
Vote တစ်ခုစီတိုင်းအတွက် ၂၅ကျပ် (+၅% အခွန်) ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး ပိုမိုနှုန်းထားသက်သာစေမယ့် နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာ အစီအစဉ်များလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။
၁။ ၂၀၀၀ ကျပ်တန် Myanmar Idol ငွေဖြည့်ကတ်များအသုံးပြုပြီး အခမဲ့ Vote SMS အစောင်ရေ ၅၀ အထိကံစမ်းနိုင်ခြင်း။
၂။ My Ooredoo App သို့သွားရောက်ပြီး SMS Voting Pack များကို ပိုမိုသက်သာသော နှုန်းထားများဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်ခြင်း။
` ၃။ Myanmar Idol ဆင်းမ်းကတ်ဖြင့် အသုံးပြုသူဖြစ်ပါက SMS Voting တစ်စောင်လျှင် ၁၅ ကျပ်နှုန်းသာကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး ထပ်မံရရှိနိုင်သောအခွင့်အရေးများမှာ ဆင်းမ်းကတ်ကို Activate လုပ်၍ ဖုန်းေ ငွ ၁၀၀၀ ကျပ် ဖြည့်သွင်းပြီးသည်နှင့် အကြိုလက်ဆောင် 1GB အပြင် အူရီဒူး အချင်းချင်း ပေးပို့နိုင်မည့် SMS အစောင်ရေ ၁၀၀ ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် နောက်အကြိမ်များတွင်လည်း EVC ဖြင့် အနည်းဆုံး ၅၀၀ ကျပ် မှစတင်၍ငွေဖြည့်ပြီးတိုင်း ၅၀% အပိုငွေဖြည့်လက်ဆောင်ကို သုံးလအတွင်းရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Myanmar Idol ငွေဖြည်ကတ်နှင့်အတူ အခမဲ့ SMS Vote များ
အခမဲ့ Vote SMS များကို Myanmar Idol ကျပ် ၂၀၀၀ တန်ငွေဖြည့်ကတ်ဖြင့် ငွေဖြည့်ပြီးတိုင်း ကံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
Myanmar Idol ငွေဖြည့်ကတ်ပေါ်တွင် SMS ကံစမ်းရန် ထည့်သွင်းရမည့် PIN ကုတ်များပါရှိပါသည်။
အဆိုပါကုတ်များကို *7777# သို့ခေါ်ဆိုပြီးနောက် ထည့်သွင်းကံစမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါကုတ်ကိုထည့်သွင်းသွားပြီးပါက စနစ်မှအလိုအလျောက် သင်ကံထူးသည့် Vote SMS အရေအတွက် ကို ဖြည့်သွင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အနည်ဆုံး အစောင်ရေ ၂ စောင်မှ အများဆုံး အစောင် ၅၀ အထိ ကံထူးနိုင်ပါသည်။
ကျန်ရှိနေသော Vote အရေအတွက်များကို *124# သို့ခေါ်ဆို၍ စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
SMS Voting Packages များ
Myanmar Idol SMS Package များကို အူရီဒူးအသုံးပြုသူများသာ ရရှိနိုင်ပြီး My Ooredoo App တွင် ၀င်ရောက်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ Buy Packs အောက်မှ SMS Tab ကို နှိပ်ပြီး အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ကျန်ရှိနေသေးသော Vote အရေအတွက်ကိုစစ်ဆေးလိုပါက My Ooredoo App ရှိ My Account (သို့မဟုတ်) *124# ကိုနှိပ်၍ စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
မိမိအနှစ်သက်ဆုံးသော ပြိုင်ပွဲဝင်များကို မည်ကဲ့သို့ Vote ပေးနိုင်သနည်း။
သင့်အူရီဒူးဖုန်းဖြင့် Vote ပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ ကုတ်နံပါတ် ၇၇၇၇ သို့ မိမိနှစ်သက်ရာပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ နံပါတ်တွေကို ပေးပို့ရမှာဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ချိန်အတွင်းပေးပို့လိုက်တဲ့ Vote များကိုသာ တရားဝင်ထည့်သွင်း စဉ်းစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိနှစ်သက်သော ပြိုင်ပွဲဝင်များကို Vote မည်မျှပေးနိုင်ပါသလဲ။
Vote များကို မည်သည့်ဘာသာစကားဖြင့် ပေးပို့ရမည်နည်း။
Vote များကို 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 11 စသဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ ပေးပို့ရပါမည်။
Vote တစ်ခုလျှင် မည်မျှကျသင့်ပါသနည်း။
၂။ My Ooredoo App သို့သွားရောက်ပြီး SMS Voting Pack များကို ပိုမိုသက်သာသောနှုန်းထားများဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်ခြင်း။
၃။ Myanmar Idol ဆင်းမ်းကတ်ဖြင့် အသုံးပြုသူဖြစ်ပါက SMS Voting တစ်စောင်လျှင် ၁၅ ကျပ်နှုန်းသာကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး ထပ်မံရရှိနိုင်သောအခွင့်အရေးများမှာ ဆင်းမ်းကတ်ကို Activate လုပ်ပြီး ဖုန်းငွေ ၁၀၀၀ ကျပ် ဖြည့်သွင်းပြီးသည်နှင့် အကြိုလက်ဆောင် 1GB အပြင် အူရီဒူး အချင်းချင်း ပေးပို့နိုင်မည့် SMS အစောင်ရေ ၁၀၀ ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် နောက်အကြိမ်များတွင်လည်း EVC ဖြင့် အနည်းဆုံး ၅၀၀ ကျပ် မှစတင်၍ငွေဖြည့်ပြီးတိုင်း ၅၀% အပိုငွေဖြည့်လက်ဆောင်ကို သုံးလတိုင်တိုင် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
SMS Voting Package ဘယ်နှစ်မျိုးရှိပါသလဲ။
SMS Voting Package သုံးမျိုးရှိပါသည်။
Voting Pack အမည်
SMS Voting Package များကို မည်သည့်နေရာတွင် ၀ယ်ယူနိုင်ပါသလဲ။
SMS Voting Package များကို My Ooredoo App တွင် အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အခြား USSD နှင့် SMS ပေးပို့ မ၀ယ်ယူနိုင်ပါ။
Myanmar Idol Voting SMS Package များ၏သက်တမ်း?
Myanmar Idol Voting SMS Package များ၏သက်တမ်းမှာ ၇ရက်ဖြစ်ပါသည်။
(သက်တမ်းမကုန်မီ တစ်ရက်အလိုတွင် အသိပေး SMS ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။)
Myanmar Idol Voting SMS Package ကို Short Code မှတဆင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါသလား။
မရနိုင်ပါ။ My Ooredoo App မှသာဝယ်ယူနိုင်ပါမည်။
Myanmar Idol Special SIM ရှိသော်လည်း ၁၅ ကျပ်ဖြင့် Vote ပေးနိုင်ပါသလား
Voting ကို ၁၅ကျပ်ဖြင့်မည်သို့ပေးပို့နိုင်ပါသနည်း။
Myanmar Idol SIM ကဒ်အသုံးပြုသူဖြစ်ပါက SMS Voting တစ်စောင်လျှင် ၁၅ ကျပ်သာကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး အပိုလက်ဆောင်များအနေဖြင့် ပထမအကြိမ် အနည်းဆုံး ငွေတစ်ထောင်ဖြည့်သွင်းပြီးပါက Welcome Bonus အနေဖြင့် 1GB + 100 Onnet SMS ကိုရရှိပါမည်။
ထို့အပြင် သုံးလအတွင်း EVC ဖြင့် အနည်းဆုံး ငွေ ၅၀၀ ဖြည့်ပြီးတိုင်း ၅၀% ငွေဖြည့်လက်ဆောင်ကို ရရှိပါမည်။
ငွေဖြည့်လိုက်ရုံနဲ့ voting ပေးဖို့ အခမဲ့ SMS တွေဘယ်လိုရမှာလဲ ?
ကံထူးထားသော လက်ဆောင် Vote များ သို့မဟုတ် Voting Package မှ လက်ကျန် Vote များကို မည်ကဲ့သို့စစ်ဆေးနိုင်ပါသနည်း။
လက်ကျန် Vote များကို *124# သို့ခေါ်ဆိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
Myanmar Idol ငွေဖြည့်ကတ်
Myanmar Idol ငွေဖြည့်ကတ်ဖြင့် ငွေဖြည့်သွင်းပါက အနည်းဆုံး ၂စောင်မှ အစောင် ၅၀ အထိ ကံထူးနိုင်ပါသည်။
ကံထူးသော Vote များ၏သက်တမ်းမှာ ၇ ရက်ဖြစ်ပါသည်။
Voting SMS Package များ
SMS Voting Package များ၏သက်တမ်းမှာ ၇ရက်ဖြစ်ပါသည်။
SMS Voting Package များကို My Ooredoo App သို့ ၀င်ရောက် ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ Voting များကို Myanmar Idol အတွက်သာအသုံးပြုနိုင်ပါမည်။
Myanmar Idol ငွေဖြည့်ကတ်များနှင့် SMS Voting Package များအသုံးပြုရာတွင် အူရီဒူးမှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီဖြစ်ရပါမည်။ www.ooredoo.com.mm တွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
SMS Vote တစ်စောင်အတွက် ကျသင့်ငွေမှာ အခွန်မကောက်ခံမှီ ၂၅ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။
ဤပရိုမိုးရှင်းကို နောက်ထပ် ပရိုမိုးရှင်းများနှင့် အခါအားလျော်စွာ ပူးပေါင်းခြင်းများအား အူရီဒူးမှ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ယခုဖော်ပြပါအချက်တို့နှင့်ပတ်သက်ပါက အူရီဒူးမြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် လိုအပ်သလို ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းအားဖြင့် အချိန်မရွေးပြုပြင်ပြောင်းလဲပိုင်ခွင့် (သို့) အချိန်မရွေးရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်သည် အူရီဒူးမြန်မာလက်ဝယ်တွင်ရှိသည်။